Steel warara, Steel mbukota eriri, kpaliri Steel warara, Iron mbukota warara - JinHe Metal
Mmiri na Blued Steel mbukota eriri
Mmiri na agba Iron eriri
kpaliri Iron Strapping
Natural Iron mbukota eriri
Ụba wax Iron eriri
Nchekwa nke Iron strapping
Iron strapping dị mfe ime ka corrosion.What anyị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ịchekwa ígwè strapping? 1.When na metal strapping na-stacked, e nwere ga-adị condensed mmiri n'elu. 2.The ikuku mgbasa ga-nọ na nkwakọba ebe ígwè strapping na-echekwara. The Asarel ...
Gịnị mere e a skew na mbukota na bundl ...
Gịnị mere e a skew na mbukota usoro? Gịnị bụ ihe mere ndị skew? Bịa na m iji chọta azịza: mbukota eriri a na-akpọ ùkwù. Ọ na-mere si polyethylene, polypropylene resin, oyi-akpọrepu warara dị ka isi akụrụngwa, nakwa dị ka naịlọn na polyester. extruded otu ụzọ na-tensile ...
Gaomi JinHe Metal Products Factory emi odude ke obodo nke knife Yan,-eto eto nke na Nobel chọr'inwe na Literature na ụwa - Gaomi City, Shandong Province.It bụ n'ebe ọdịda anyanwụ nke Qingdao (Qingdao Port) na na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke WeiFang obodo . JiaoJi Railway na QingYin Expressway agafe Gaomi City magburu onwe ọnọdụ na-adaba adaba njem.
Tinye: okwu: 666 Home Textile Road, gaomi obodo, Shandong Province